Wasiirka Gaadiidka Iyo Jidadka oo Buriyay Warqad Isku Shaandhayna oo Ka Soo Baxday Xafiiska Haayadda Wadooyinka | Baligubadlemedia.com
Wasiirka Gaadiidka Iyo Jidadka oo Buriyay Warqad Isku Shaandhayna oo Ka Soo Baxday Xafiiska Haayadda Wadooyinka
October 11, 2018 - Written by admin
Wasiirka gaadiidka iyo horu marinta jidadka somaliland Cabdilaahi Abokor ayaa is hor taagay isku shaandhayn uu maareeyaha hay’adda waddooyinku ku sameeyey agaasime waaxeedyada hay’addaasi.
Qoraal uu wasiirka gaadiidku u diray maareeyaha hay’adda wadooyinka oo luuqad adag ku qornaa ayuu ku sheegay inaanay waxba ka jirin isku shaandhaynta uu sameeyey maareeyaha hay’adda waddooyinku.
Wasiirka gaadiidka iyo horu marinta jidadka ayaa warqada xafiiskiisa ka soo baxday waxa uu si amar ku taaglayn iyo awood sheegasho ah ugu hanjabayaa maareeyaha hay’adda horu marinta waddooyinka somaliland Cismaan Sheekh Cabdi isaga oo adeegsaday eraydan “Awood sharci iyo mid maamul toona uma lihid inaad magacaabis, xilal cusub, abuuris waaxo cusub
iyo xil ka qaadis ku samaysid agaasime waaxeedyada wakaalada horu marinta waddooyinka.
Waxaanan go’aamiyey inaan buriyo waraaqda sumadeedu tahay Ref:RDA/MG/246/2018, waxaan ku farayaa inaad u hogaansanaato xeerarka iyo shuruucda maamul ee dalka, haddii kale waxaan kaa qaadi doonaa talaabo sharciga waafaqsan oo aad ku mudan karto in shaqada lagaa joojiyo maadaama aad caadaysatay khilaaf iyo sharci jabin joogto ah.”
Qaabka uu wasiir Cabdilaahi Abokor ugu hanjabayo maareeyaha hay’adda wadooyinka somaliland ayaa laga dhadhansan karaa in wasiirku u mareexaanaynayo maareeyaha, isla markaana la dareemayo inuu awood dheeraad ah haysto maadaama oo uu shaqo joojin ku hanjabayo.
Maareeyaha hay’adda wadooyinka ayaan dhiniciisa wax jawaab ah ka bixin warqada amarka ah ee uga timid wasiirka gaadiidka iyo horu marinta jidadka, iyada oo warqadana si toos ah loogu socodsiiyey masuuliyiinta cusub ee uu magacaabay maareeyuhu kuwaas oo la farayo inaanay waxba ka soo qaadin magacaabista maareeyaha hay’adda waddooyinka.